ဘင်ဂါလီ ဟုတ်၊ မဟုတ် စစ်ဆေးနိုင်မည်. နည်းပညာ မြန်မာနှင့် အမေရိကန် ပညာရှင်များ တီထွင် ~ Myanmar Forward
Posted by drmyochit Wednesday, September 26, 2012, under သတင်းများ | No comments
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဋ္ဌာန လက်အောက်ရှိ တပ်မတော်ဆေးသုတေသန တပ်ဖွဲ. နှင့် အမေရိကန် NASA မှ ပညာ ရှင်များပူးပေါင်း ပြီး လူမျိုးခြား ဘင်ဂါလီများ ဟုတ်မဟုတ် အောင်မြင်စွာ ဖော်ထုတ် နိုင် သည်.နည်းပညာ ကို ရှာဖွေ တွေ.ရှိခဲ့ ပြီ ဖြစ်သည်။ genetic engineering technology နှင့် Na no technology ပူးပေါင်း ပြီး လူသားမျိုး နွယ်စု များ အား Gene Typing ပြုလုပ်ခြင်း နည်းပညာ ကို NASA မှ ရှာဖွေတွေ.ရှိ ပီး ဖြစ်သော်လည်း မြန်မာပြည် သို. ခိုးဝင်လာသော ဘင်ဂါလီ များ ကို ပထမ ဆုံး အကြိမ် အောင်မြင်စွာ စမ်းသပ်နိုင် ခဲ့ ခြင်းဖြစ် သည်။ အမည်မဖော်လို သူ မြန်မာ စစ်တပ် အရာရှိ တစ်ယောက်၏ ပြောကြားချက်မှာ " အခု နည်းပညာ က အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ကျီးကန်း တွေ ဟုတ်မဟုတ် ကို တန်း ကတည်း သိနိုင်တယ်။ တချို. မြန် မာမတွေ ကို ယူပြီး မွေး ထားတဲ့ ကလေး တွေ ဆို လည်း စစ်လို.ရတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ.မှာ က နည်းပညာ အခက်အခဲ နဲနဲ ရှိ တယ်။ အဓိကကတော့ ဒီနည်းပညာ က အမေရိကန်က စစ်သွေး ကြွ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ ကို နှိမ်နင်းဖို. တီထွင်ထားတဲ့ နည်းပညာလို.တောင် ပြော လို.ရတယ်။ grade A,B,C,D,E ဆိုပီး ၅ ခုရှိ တယ်။ positive ဆို တာနဲ့ grade ထပ်ခွဲ ရတယ်။ A နဲ. B ဆို ရင် လုံးဝ မွတ်စလင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အစွန်းရောက် စစ်သွေးကြွ လို. သတ်မှတ် တယ်။ လားပင်စင် ပေးရမယ့် ကောင်တွေပေါ့။ C ဆိုရင် အစ္စလာမ်တော့ အစ္စလာမ် ၊ အစွန်းရောက်တော့ မဟုတ်ဘူး ဒါပေမယ့် အချိန်မရွေး အစွန်းရာက်သွားနိုင် တဲ့ သူတွေ ပေါ့၊ ကျွန်တော် တို. စမ်းသပ်ပီး သလောက် မြန်မာ မွတ်စလင် တချို. ဒီ group ထဲ မှာ ပါနေတာ တွေ. ရတယ်၊ ၀မ်းသာ စရာ ကောင်း တာ ကတော့ မြန်မာ မွတ်စလင် အများ စု ကတော့ group D နဲ. E မှာ ပဲ ရှိ ပါတယ်။ ကပြား ဆို ရင်တော့ သပ်သပ် Test Kit နဲ. တိုင်းရပါ တယ်။ သူ.မှာ ထူးခြားချက် တစ်ခု က အမေရိကန် က အထူး တီ ထွင် ထား တာ ပါ။ အစ္စလာမ် ဘာ သာ ၀င် တွေ က သူ များ ဘာသာ ထက် ရန်လို မှု များ တယ်။ မများ ရင် လည်း ဦး နှောက် က အင်ဒို ဖရီ နွိုက် လို. ခေါ် တဲ့ ဟော်မုန်း အထွက်များ တယ်။ ဒါကို NASA က 1990 လောက် ကတည်း က တွေ.ထား တယ်။အဲဒါကြောင့် ကုလားအမျိုးသမီးတွေ ကိုယ်နံ. ပျင်းတာတွေ ဘာတွေ ရှိ တယ်လေ၊ အဲဒါကို တိုင်းခြင်းအားဖြင့် အစ္စလာမ်ဘာ သာဝင် ဘယ်လောက် စစ်လဲ သိရ တယ်။ အဲ ဒီမှာ လည်း level အမျိုးမျိုး ရှိ တယ်။ ထူးခြား တာ က သူ.မှာ - အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ကနေ တခြား ဘာသာ ကို ပြောင်းသွားရင် သူ က တစ်နှစ် အကြာ မှာ positive ကနေ negative ဖြစ် သွား တယ်။ ဒီ နည်းပညာ ကို နောက် နှစ် ပြည် လုံးကျွတ် သန်းခေါင် စာရင်း ကောက်ယူ ရင် အကုန် လုံးတော့ အသုံး မပြု နိုင် သေး ပါ ဘူး တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အနေနဲ. သံသယ ရှိ တဲ့ သူတွေ ကို စောင့် ကြည့် စစ်ဆေး သွား မှာ ပါ။" လို. ပြော ကြား သွား ပါတယ်။
ထိုင်ဝမ် နှင့် ဂျပန် အပြန်လှန် ပစ်ခတ်
KIA လိုင်ဇာဌာနချုပ်မှ ဆင်း၍ ဆက်ကြေးကောက်နေ
KIA နှင့် မူးရစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေး အစီစဉ်
common street Punk လူငယ်များ စစ်တပ်ထဲ ဝင်မည်
ရုရှားအရှေ့ဖျားတွင် ငါးမိုးရွာကျမှုကြောင့် ဒေသခံပြည...
ယောကျာ်းလေးတွေ အလွန်ကြောက်သော ဒီလိုမိန်းမများ (ပေး...
KIA မှဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသူများထဲမှ ၃ ဦး ပြန်လည်ထ...
(၂၇)ကြိမ်မြောက် ဆီးဂိမ်းဖွင့်ပွဲ ပိတ်ပွဲ အခမ်းအနား...
ပြည်တွင်းဈေးကွက်၌ နေ့စဉ်စီးဆင်းနေသည့် ဒေါ်လာငွေကြေ...
နွေရာသီ၌ ဓာတ်အား လုံလောက်မှု ရရှိရန် ဂျပန်နိုင်ငံမှ...
ရေပိုင်နက်အငြင်းပွားမူ ဂျပန်နှင့်ထိုင်ဝမ် အပြန်အလ...
ခိုးဝင်လာတဲ့ ဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေအကြောင်းကို သမ္မတကြီးဦ...
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဒေါက်တာဦးသိန်းစိန် အမေရိကန်သိ...
လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေး အမေရိကန် ကူညီမည်
မြန်မာပြည်မှာနေတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေကို မြန်မာမွတ်ဆလင်လု...